Hondo dzeMweya minamato yemari | MINYENGETERO MARI
musha Munyengetero Hondo dzeMweya minamato Yemari
Hondo dzeMweya minamato Yemari
Ngatitorei iwe neimwe yemweya yehondo minamato yemari. Ndakaverenga zvemagariro enhau kare svondo rapfuura kuti hurombo haufe nemoto; kungomhanya chaiko kunogona kuuraya hurombo. Vanhu vazhinji vanosimuka zuva nezuva nekutenda uku, uye vanokanganwa nzvimbo yeminamato. Izvo vanhu vazhinji vanotadza kunzwisisa ndezvekuti zvemweya zvinodzora zvepanyama, uye hapana chinhu chichaitika munyama chisina kugadzikana munzvimbo dzemweya.
Zvakawanda sekutenda kwedu uye neruponeso paatari yemweya, ndozvowo nezvese zvine chekuita nehupenyu hwedu. Tinotora chigaro kubva kunevenyama yemweya uye tinoratidzira mune venyama. Mari yedu, semuenzaniso, inogona kugadziriswa kubva kumweya wemweya, uye tinoita kuti zvinhu zviitwe munyama. Kana kuti hauna kuverenga chikamu cherugwaro chinoti Mwari wangu achandipa zvese zvandinoda maererano nehupfumi hwake mukubwinya kubudikidza naKristu Jesu.
Kazhinji, kuratidzwa uye kubudirira kwemari yedu kunogona kunonoka kana kudziviswa nemamwe masimba asingaonekwe. Kusvika padanho rakakura, kubuda kwemari kunoreva kubudirira uye kuunganidzira hupfumi. Kwemakore embongoro, Jacob aive achishanda asinganeti uye zvakadaro. Aive achangobva mhedzisiro yekuratidza. Paive nesungano yekuropafadza uye yekubudirira pane hupenyu hwaJacob, asi zvakadaro, aive achirarama zvese zvake zvakaitika mukutadza uye nekutya. Dai hustle raive zvechokwadi mhinduro yekurapa hurombo, Jacob angadai akapfuma kwazvo pasina rubatsiro rwaMwari. Jabez angadai akave mumwe wevapfumi varume muhondo dzake pasina kupindira kwaMwari Wemasimbaose.
Mifananidzo iyi yese ndeyekungotiudza kuti munamato zvakare ndiwo mhinduro kune urombo sekuwanda kwakaita hustle. Nekudaro, kana iwe uchinge wakasimba pane imwe nguva yekubudirira kwemari, usatorega moto uri paatari yemunamato uchitonhora futi. Namata nepamunogona napo.
Kana iwe uchida mweya yekunyengeterera yehondo minamato yako, usatarisa mberi, isu takanyora runyorwa rwemasimba masimba minamato minamato yemari.
Ishe Jesu, ndimi Mwari wazvose-zvakakwana, ini ndinoisa mari yangu mumaoko enyu anokwanisa, ndinonamata kuti muizozvikanda. Ini ndinouya kuzopesana neyakaipa yese inokanganisa kuyerera kumusoro kwemari yangu. Ndinovaparadza muzita raJesu.
Ishe Mwari, rugwaro rwakavimbisa kuti muchandipa zvandinoda maererano nehupfumi hwenyu mukubwinya kubudikidza naKristu Jesu. Ndinonamatira simba renyu remweya pane wangu mari. Rega maoko ako positivity azorore pane mari yangu muzita raJesu.
Ini ndinosunungura mari yangu kubva pamusungo wedhimoni. Wese ane mweya yakaipa anotora simba pamari yangu, ndinoiparadza muzita raJesu.
Ishe Mwari, ndimi Mwari wezvose zvinobvira, uye ndoziva kuti newe, hapana chingamboitika. Ini ndinotema nemvumo yekudenga kuti iye anove asiri iye anondirwisa mari yangu anoparadzwa nemoto muzita raJesu.
Ishe Jesu, makatipa simba pamusoro pezvinhu zvese zvakasikwa. Ini ndinoramba kuve muranda wemari muzita raJesu. Ini ndinogashira masimba angu pamusoro pemari. Ini ndinotora mari yangu. Ini ndinosunungura mari yangu kubva mukutonga kwadhiyabhorosi muzita raJesu.
Ini ndinotema nechisimba chedenga kuti kubva zvino, kuyerera kumusoro kwemari yangu hakuchazobatwa nasatani zvekare. Moto weMweya Mutsvene unoparadza simba rega rega riri kuita kuti ndishande senzou uye kuita kuti ndidye senge svosve.
Ishe Mwari, ndinonamata kuti nengoni dzenyu, mundidzidzise mashandisiro andinoita mari yangu. Rugwaro rwakaita kuti tinzwisise kuti pfungwa dzese dzakanaka dzinobva kwauri. Ini ndinonamata kuti utungamirire maoko angu-pane maitiro ekuumba hupfumi. Uye iwe uchandidzidzisa maitiro uye maitiro ekuchengetedza hupfumi muzita raJesu.
Ini ndinouya kuzopesana nemweya wega wehurombo uyo ungade kundibata mari yangu. Ini ndinoparadza masimba akadaro muzita raJesu.
Ishe Mwari, ndinoisa matambudziko angu emari nemutoro pamusoro penyu, Jesu. Nekuti zvakanyorwa, zvichinzi, Matewu 11: 28-30 Uyai kwandiri, imi mose makaneta makaremerwa, uye ini ndichakupai zororo. Tora joko rangu pamusoro pako, udzidze kwandiri; nekuti ndiri munyoro, ndine moyo unozvininipisa, uye muchawana zororo remweya yenyu. Nekuti joko rangu rakareruka, uye mutoro wangu wakareruka. Ini ndinotsvaga kuzorora mamuri, Jesu. Ini ndinotema kuti ini ndinowana rubatsiro rwemari muzita raJesu.
Ini ndinotema kuti matambudziko angu ese emari apera; makore angu okumirira apera; ino nguva yekupupura. Ini ndinosimudzira kuti nesimba riri muzita raJesu, maoko angu atanga kuita hupfumi, ini ndinotema kuti mutoro wangu wemari wakasimudzwa muzita raJesu.
Ini ndinotora kutonga kwangu pamusoro pemari. Pandinofona, mari inopindura. Ndinoramba kuva muranda wemari muzita raJesu. Ini ndinopinda munzvimbo yakanatswa yemaropafadzo aAbrahama. Ini ndinotora pfuma yake, uye ini ndinotanga kuvhura hupfumi hwakavanzika,
Ini ndinosunungura hupfumi hwangu hwese hwakavanzika muzita raJesu.
Ini ndinozvibatanidza kune murume wese uye mukadzi anga akagadzirirwa kundisimudza nemari. Ini ndinozvinamatira kune munhu akadai nezita raJesu.
Ini ndinotema chirevo kuti nemuzita raJesu, murume kana mukadzi wese akasimba anga akagara pamari anobata moto muzita raJesu. Moto weMweya Mutsvene unotanga kupisa dhimoni roga roga iro rakaramba kuti mari yangu izorore muzita raJesu.
Ini ndinoparadza zvipembenene zvese nemhashu zvave kudya mari yangu mudenga remweya. Ini ndinodaira kuti vabate moto muzita raJesu.
Chero chidhimoni chawakatumirwa naDhiyabhu kuti chiba ziya rangu, ndinotema chirevo kuti vabate moto muzita raJesu.
Previous nyayaHondo Minamato neMagwaro
inoteveraMunamato weRununuro kubva pachivi
Joseph Tembo Chikunguru 9, 2020 At 1:09 am
Kunamata Kunongedzera Pamubhedha Wetting
Munamato Vabereki Vanofanira Kuti Vana Vayo MuYunivhesiti